अनौठा तिम्ल्याहा - विदेशबाट - नेपाल
- नेपाल संवाददाता
एक बंगलादेशीले पहिलो सन्तानका रुपमा छोरा जन्माएको झन्डै एक महिनापछि जुम्ल्याहा सन्तान लाभ गरेकी छन् । समय नपुग्दै फेब्रुअरीको अन्तिमतिर पहिलो सन्तान जन्माएकी खुल्ना जिल्लाकी २० वर्षीया अरिफा सुल्तानालाई त्यसको २६ दिनपछि पेट दुखेर अस्पताल पुर्‍याइएको थियो । अस्पताल पुर्‍याउँदासम्म उनी अझै गर्भवती छन् भन्ने कसैले सोचेका थिएनन् । अल्ट्रासाउन्डपछि उनको पेटमा अझै दुइटा बच्चा रहेको पाइयो । गरिब परिवारकी ती महिलाले पहिले अल्ट्रासाउन्ड गराएकी थिइनन् ।
शल्यक्रियामार्फत जुम्ल्याहा छोरा र छोरी निकालेको चार दिनपछि महिलालाई डिस्चार्ज गरिएको थियो । आकस्मिक शल्यक्रियामा संलग्न डा शीला पोदारले बीबीसीसँग भनेकी छन्, ‘मैले यस्तो केस कहिल्यै सामना गरेकी थिइनँ ।’ डा शीलाका अनुसार तीनै सन्तान सकुशल छन् । परिवारमा नयाँ सदस्य आएका कारण तिम्ल्याहाकी आमा खुसी भए पनि अब बच्चाहरुलाई कसरी हुर्काउने भनेर चिन्तित छन् ।
प्रकाशित: चैत्र १८, २०७५
थप केही विदेशबाट बाट
सीको असफल बिहे
वैशाख ८, २०७६
कुकुरको पेटमा के थियो ?
वैशाख ३, २०७६
शिशुको काँडाधारी कपाल
चैत्र २६, २०७५
साङ्लो मार्न बन्दुक !
चैत्र १०, २०७५
नोबेल मनोनयनमा १६ वर्षीया किशोरी
चैत्र ३, २०७५
कंकालका मुटु गायब
फाल्गुन २६, २०७५
अनुहारभरि महिनावारीको रगत
फाल्गुन २०, २०७५
१२ देश, १२ महिना, १२ बिहे
फाल्गुन ६, २०७५